जमीन बाँझो राख्नुभएको छ ? होस् गर्नुहोस् कारबाहीमा पर्नुहोला - Deshko News Deshko News जमीन बाँझो राख्नुभएको छ ? होस् गर्नुहोस् कारबाहीमा पर्नुहोला - Deshko News
जमीन बाँझो राख्नुभएको छ ? होस् गर्नुहोस् कारबाहीमा पर्नुहोला
रत्ननगर, भदौ २
यदि तपाईले जमीन बाँझो राख्नुभएको छ भने सदुपयोगमा ल्याउनुहोस् । यदि मान्नुभएन भने कारबाहीमा पर्नुहोला ।
यो व्यवस्था रत्ननगर नगरपालिकाले गरेको छ । उत्पादनमूलक जग्गालाई बाँझो राखेर छाड्नेलाई नगरसभाबाटै निर्णय गरी जरिवाना लिन थालिएको नगर प्रमुख नारायण वनले जानकारी दिए ।
नगरपालिकाले कारबाही गर्न पनि सुरु गरिसकेको छ । अहिलेसम्म विभिन्न वडामा बाँझो जमीन राख्नेहरुबाट एक लाख ३६ हजार रुपैयाँ उठाइसकेको छ । जुन राजश्वमा जोडिएको छ। नगरपालिकाले बाँझो जमीन राखेको पाइएमा प्रतिकठ्ठा रु ५०० का दरले जरिवाना लिने गरेको छ ।
नगरपालिकाले यहाँको सरकारी जग्गाको संरक्षण अभियानसमेत अगाडि बढाएको जग्गा संरक्षण समितिका संयोजक हरिकुमार श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म करीब ३० विगा सार्वजनिक जग्गा खोजी गरी संरक्षण गरिएको छ । ठाउँठाउँमा भने जग्गामा विवाद भएकाले निकास निस्कन सकेको छैन । रासस